Jadwalka kulamada horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga ee xili ciyaareedka 2018-2019 oo lasoo saaray – Gool FM
(Serie A) 26 July 2018. Waxaa lasoo saaray jadwalka horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga ee xili ciyaareedka 2018/2019, waxaana isbuuca koowaa is arki doona kooxaha Lazio iyo Napoli.
horyaalka Serie A ee dalka Talyaaniga ayaa la daah furi doonaa 18 bisha August ee soo aadan, wuxuuna xili ciyaareedka soconayaa ilaa iyo Axadda, May 26-keeda sanada 2019, xiligaas oo dhamaan kulamada la wada ciyaari doono hal waqti.
Waxaa jira saddex toddobaad oo isbuuca gudihiisa la ciyaari doono waana 26-ka Sebtembar, Disembar 26-keeda, iyo Abriil 3-deeda.
Waxaa jiri doona afar fasax oo caalami ah 9-ka Sebtember, 14-ka Oktoobar, 18-ka Noofambar iyo 24-ka Maarso.
Kulanka ay Napoli la ciyaareyso Lazio waa kan ugu horeeya ee wareega koowaad.
Juventus ayaa ku bilaabaysa difaacashadeeda horyaalka kulanka ay martida u noqon doonto Chievo, AC Milan ayaa la ciyaari doonta Genoa, Torino iyo Roma, sidoo kale Inter Milan ayaa la ciyaari doonta Sassolo.
Jose Mourinho oo sharaxaad ka bixiyay faa’iidada ka dambeyn karta ku biirista Cristiano Ronaldo ee kooxda Juventus